Gabaasa Seminaara fi Qophii Aadaa Oromoo Magaala Nürnberg
Duraan dursa barreessaa TBOJ kan ta'an obbo Fallaqaa keessumoota simatanii toora sagantaa guyyaa sanaa ibsan. Itti aansuudhaan dura ta'aa TBOJ kan ta'an obbo Makonon Gurmessa hirmaatota nagaa gaafachuudhaan maangudootni eebbaan akka bananiif namota lama, obbo Kenesa Yadeta fi obbo Kadir Sera Jatane gara fuulduraatti afeeruudhaan seminaarri kun eebba mangudootni kun wal duraa boodan godhaniin baname. Akkasumas daqiiqaa muraasaaf gootota Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo irraati bakkaa fi yeroo garaagraatti wareegaman akka yaadatan taasifameera.
Qophii Aadaa ilaalchisee dubartoonni fi dhiironni uffata aadaa Oromoo godinaalee Oromiyaa hundumaa uffachuudhaan hirmaatota seminaara guyaa kanaa bo'arsaniiru. Kuins sirba Hacaaluu Hundesaa keessaa issa “Tokkumaa, tokkummaa...” jedhu hirmaatota hundumaa waliin hundumtu harka walqabatanii weediisuudhaan ergaa guddaa tokkumaa Oromoof barbaachisu dabarsan. Akkasumas nyaati qophaa’ee, bunas Jabanaatti danfisuudhaan namootni akka nyaatani dhugan gochuudhaan aadaa miidhagaa Oromoon wal afeeruu irratti qabuu mulli'fameera.
1. Jalqaba irratti obbo Makonon irraa rakkoo mootumaan wayaane yeroo ammaa uumata Oromoo irraan ga'aa jiru ball'inaa ibsan. Kunis biya Itiyoophiyaa keessatti Oromoota hedduun, hidhaadhaan, reebichaan, ajjeechaadhaan, beelaan, dhukkubaan, qote-bultoonni xaa'oo dhabuudhaan, dargaggoonni manneetii barumsaa keessatti miidhaa gurguddaan irra ga'uun, qee'ee ofii irraa buqqa'uu, biya gad dhiisanii baqachuu fi kan kana fakaataniin miidhamaa akka jiran ibsan. Biyya itti baqatan keessattis, miidhaa suukanneessaa, kan akka ajjeechaa, humnaan gudeedamuu, beelaa fi dheebuun karaa irratti du'uu irra ga'aa jira. Malaamaltumaan dagaaguu isaa, maqaa misoomaan mootumaan uumata saamaa jiraachuu isaas ibsan. Biya keessattis ta'e biya alaatti Nafxanyoonni aadaa fi afaan oromoo akka dadhabuu gochuuf yaalii gurguddaa gochaa akka jiran, namoota boriif ilmaan Oromoof bu’aa guddaa buusu jedhamanii abdatamanis karaatti hambisuuf yaalii akka godhan dubbatan. Walumaa gala Habashootni biya Itiyoophiyaa, isaa aadaa, amantii fi afaan warra Amaaraan bulu qabaachuu waan barbaadaniif amantii, aadaa fi afaan Oromoo irratti karaa danda’an lola akka banuuf boodeetti deebi’aa hin jire yaadachiisan. Tokkumaa Oromoo akka jaarmiyaattis ta’e akka hawaasaatti diiguuf hojjetu. Kanaaf miidhaan kun hundi oromoo hundumatti dhaga'amuu, oromoon hundi bakka jiru hundumaatii diina isaa irratti dammaquu, akka qabus dabalanii yaadachiisan. Oromoon hundi wal caccabsuu, wal diiguu, wal irratti ka'uu dhiisee tokkumaadhaan humna walii ta'ee akka ka'uu qabu hubachiisan.
Kanatti dabaluudhaan obbo Fallaqaa barreessaa TBOJ kan ta’an waa'ee “I am Oromo first” jecha obbo Jawar Mohamad jedhee Al Jazeera irratti dubbannaan nafxanyoota aarsee irratti yaada qajeelfamaa kennaniru. Innis nuti kan jechuu qabnu ifaatti “Nuti Oromoodha” kan jedhu ta'uu qaba malee “dursa (first)” jechi jedhu isa booda “next what?” gaaffii jedhu uuma waan ta’eef nuti jalqabaa hanga dhumaatti Oromoo dha jedhanii hubachiisan.
2. Itti aansuudhaan miseensa TBOJ keessaa namoonni lama obbo Firealem Wasane fi obbo Baahailuu Mengistu Wal duraa boodaan waraqaa dhi’eessan. Obbo Firealem mata duree, “Academic Freedom in Ethiopia” jedhu irratti yeroo dhi’eessu maneetiin barumsaa sadarkaa gadiitii hanga universiitiitti harka mootummaa wayyaanee jala waan jiraniif walabumaan barnootaa (academic freedom) biya Itiyoophiyaa hin jiru jedhaniiru. Barattootan miseensa motummaa wayyaanee hin taanerras manneetii barumsaa sadarkaa hundumaatti hidhaan, ajjeechaan, barumsarraa ar'atamuun irra ga'aa akka jiru, universiitii baayyeen banamanii yoo jiraatanuu qulqullinni barumsaa akka hin jirre, barsiisonni fi meeshaleen barumsaa ga'aan akka hin jirre ibsan. Kanaaf warra afaan hin qabnef afaan ta'uudhaan baratoota biyyicha keessatti rakkachaa jiran bakka buunee dubachuu qabna jechuudhaan ergaa dabarsan.
Obbo Baahailuunis mata duree “Adeemsa Qabsoo Uumata Oromoo” jedhu irratti yeroo dhi’eessan, mootummaan tokko fedhii fi hirmaannaa uumataa of keessaa hin qabu taanaan uumatichi mirga hin qabu jechuudha jedhanii ibsan. Qabsoon Oromoof godhamaa jiru hundi bu'aa hedduu argamsiisu iyyu amma iyyuu galma hin ga'in waan jiruuf uumtni Oromoo tokko ta'uun ga'ee irraa barbaadamu ba'uudhaan qabsoo finiinsuu qaba kan jedhu ergaa dabarsaniiru.
3. Kanatti aansuudhaanis namoonni sadii yaada kennaniiru. Obbo Gammadaa Nure miseensa KHG TBOJ kan ta'an duula saba oromoo irratti karaa garaa garaa geggeefamu dura dhaabachuuf, namni hundi ofii ofiif, uumata isaaf waan gochuu qabuu of ilaaluu, waliigaltee qabaachuu qaba jedhan.
-Obbo Harun Kalil Bati qabsaa'aa hidhannoo ABO kan turan, lola nafxanyootaa dura dhaabachuudhaaf Oromoon hundumtuu maalummaa, Oromummaa fi Saboontummaa qabaachuu qabna jedhan.
-Obbo Umar Abdusalam Tilmo qabsaa'aa hidhannoo ABO kan turan qabsoon Oromoo ciminaan itti fufuuf wal kabajuu fi wal dhaga'uun hoggantoota siyaasaa keessattis ta'e Umata Oromoo hunda keessatti hojiidhaan mullachuu qaba jedhan. Dalagaan uumata miidhu dhaabbatee tokkumaadhaan qabsoo itti fufuu qabna jedhanii yaadachiisan.
Namoota qaama garaa garaa irraa afeeram keessa jalqaba irratti bakka bu'aan ADO, obbo Abdi Abbaajabal sagantaaleen seminaarichaa baayee gaarii ta'uu isaa erga dubbatani booda tooftaan siyaasa ADO maal akka ta'e hirmaatotaaf ibsan. Innis attamitti Oromoon biyicha keessatti aangoo siyaasaa fudhatee abbaa biyaa ta'uudhaan sabaa fi sab-lammootii biyicha keessa jiraatan hundaa waliin jiraachuu akka qabu irratti kan xiyeefate ta'uu isaa dubbatan. Itti dabalaniis holola hin taane walirratti oofuun hafee kaayoo siyaasa ADO keessatti hirmaannaa akka qabaataniif namoota hundaaf waamicha dabarsan.
5. Obbo Baqqalaa Tafarraa mata duree “Mirga dhala namaa biyya Itiyoophiyaa keessa jiru” jedhu irraatti waraqaa balli’aa dhi’eessan. Mootumaa dhufee darbu hundumaa keessatti biyattii sana keessatti mirgi dhala namaa kan dhiitamu akka ta'e ibsan. Bara 1991 yeroo paartiin TPLF biyicha olaantummaan bulchuu eegalee kaasee immoo caalaa mirgi namaa dhiitamaa akka jiru, namootni siyaasa mootumichaa hin deggerre, miseensa kan hin ta'in sababii dhara ta'e itti funaanuun mana hidhaatti akka guuran, kaan akka ajjeesaan, kaan qaama isaaniirra miidhama ciccimaa akka geessisan, barattoota manneetii barumsaa keessaa akka har'an, kaan akka hidhanii fi ajjeesan bifa qabatamaa ta'een suuraa namoota miidhamni kun qaqqabe agarsiisuun ibsanii jiran. Kunis mootummaan wayaanee seera biyichaa keessatti waa'ee mirga dhala namaa ilaalchisee kaa'amee kan jiru iyyuu cabsaa akka jiru dubbatan. Biyatti keessatti uumatni harki caalu baadiyaa kan jiraatuu fi qonna irratti bobba'ee kan jiru yoo ta'e iyyuu haalli qonnaa boodatti hafaa waan ta'eef rakkoon homishaa ga'aa dhabuu beela biyicha keessa jiruuf sababa jedhan. Yeroo filannoo irrattis paartii mootummaa aangoo irra jiru qofti teermii teermiin akka aangoo gad hin dhiifne gochuudhaaf bifa hundumaan irratti hojjetama. Fakeenyaaf filannoo 2010 geggeefame irratti EPRDF 99% tiin filameera ofiin jedhe. Mormii yeroo filannoo dhaabileen mormitootaa godhan irraa kan ka'us namoota baayeetu ajjeefama, kaan immoo hidhama, kaan immoo biyya gad dhiisee baqata jedhaniiru.Uumata irraa lafaa fi araddaa saamaa jira. Kanaaf gaaffiin uumataa yeroo hundumaa mootummaa diktaatera ta'e kana maaliif filanna isa jedhuu dha jedhanii hubannaa ball’aa kennan.